Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Galgaduud, ayaa waxaa goor dhow lagu dhaawacay weerar ka dhacay wadada mashquulka badan Maka Al Mukarama – STAR FM SOMALIA
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Galgaduud, ayaa waxaa goor dhow lagu dhaawacay weerar ka dhacay wadada mashquulka badan Maka Al Mukarama
Xuseen Cali Wehliye (Cirfo), Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Galgaduud, ayaa waxaa goor dhow lagu dhaawacay weerar ka dhacay wadada mashquulka badan Maka Al Mukarama ee Magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha oo watay gaari SURF ahaa, ayaa waxaa lagu horgooyay gaari kale oo kuwa yar yar ah, waxaana xigtay rasaas xoogan oo oodda looga qaaday.
Dembiilayaasha, ayaa waxaa u suurtagashay inay ka cararaan oo ay ka baxsadaan halka loo yaqaano Shaqaalaha, oo ah goobtii lagu weeraray Masuulkaasi.
Gudoomiyaha, ayaa waxaa dhaawaciisa lagula cararay Isbitaalka Madiina oo iminka wax looga qabanaayo xaaladiisa caafimnaadeed. Gudoomiyuhu wuxuu dhaawaciisu yahay mid fudud.
Ciidamada Dowladda Somaliya, ayaa waxay baaritaano ka wadaan goobaha ku dhow dhow halkii lagu weeraray Xuseen Cali Wehliye, inkastoo aysan jirin dadka ay u soo qab qabteen falkaasi.
Hay’adaha ammaanka, ayaan weli ka hadlin weerarka abaabulan ee goor dhow ka dhacay wadada halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka ee Magaalada Muqdisho.
Weerarada ceynkani oo kala ah, ayaa ku soo badanaaya Magaalada Muqdisho, waxaana liita ka hor tagga iyo ka daba tagga ee laamaha amniga Magaalada Muqdisho.
Qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama
Taliyaha Hey’adda Nabadsugida ayaa sheegay in dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya isku qarxiya ay yihiin kuwa ka yimaada qurbaha